Raadinta Aragtida Tab ee Google Analytics | Martech Zone
The Maktabadda Isdhexgalka Isticmaalaha Yahoo waxay leedahay xakameyn tab fudud taasi waxay kuu ogolaaneysaa inaad daabacdo hal bog oo leh waxyaabaha ku duugan dhowr tabs. Xakamaynta waxay ku shaqeysaa adeegsiga liistada liistada dhibbanaha iyo divs si gaar ah loo calaamadeeyay
Isticmaalka Google Analytics, waa wax iska fudud in lagu daro farsamaynta raadraaca bogga tab kasta. Qaybta barroosinka gudahiisa shay kasta, ku dar dhacdo onclick ah oo ku dareysa bog bog a dalwaddii .
Waad habeyn kartaa wadada ku dhex jirta xigashooyinka si kasta oo aad u jeceshahay.
Si aan u nadiifiyo bogga, waxaan sidoo kale ku riixi lahaa bogga aragtida tabka markii ugu horreysa ee uu furmo maaddaama qof walba uu daawan doono tabka marka uu furo bogga. Waxaad ku sameyn kartaa tan a dusha jidhka dhacdo halkii ay ka ahaan lahayd dhacdo onclick loo adeegsaday tag (a) sumadda.
Adeegso tusmada Qoditaanka Waxyaabaha kujira Google Analytics waxaadna hada u wareegi kartaa boggaaga (ama shaandhayn kartaa "tabs") oo waxaad ka heli kartaa aragti dhammaystiran oo ku saabsan adeegsiga iyo aragtiyada waxyaabaha aad ka kooban tahay.
Tags: Ajaxqabashada hogaamintafirfircoon xamuulFoomamka culayskaculussicirka-ku-gaadhiga wareegaka shaqeynta lacag-bixinta moobilkalaabcalaamadeynta bulshadadariishaddafoomamka wordpress
Iska indha, Cabir iyo Diirad saar
Nov 15, 2011 saacadu markay tahay 9:56 PM
Nov 15, 2011 saacadu markay tahay 9:58 PM